QM oo muddo kordhin u sameysay Xafiiska UNSOM | SMC
Home WARARKA MAANTA QM oo muddo kordhin u sameysay Xafiiska UNSOM
15-ka xubnood ee golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa muddo ugu daray Xafiiska Qaramada Midoobey ee Soomaaliya UNSOM sida lagu sheegay Bayaan kasoo baxay Golaha.
UNSOM ayaa la sheegay in ay howsha sii wadi doonto ilaa 31 August.
Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in Xafiiskaan uu ka taageero Soomaaliya nabadda, dib u heshiisiinta, dib u dhiska dowladaha Federaalka, dib u eegista Dastuurka iyo qabanqaabada doorasho cadaalad,sanadkaan 2020.
Golaha ayaa sheegay in ay ka go’an tahay in xafiiskooda uu kaalin ka qaaato doorashada lagu waddo in ay ka dhacdo Soomaaliya dhamaadka Sanadkaan ilaa bilowga Sanadka soo socda.
UNSOM ayaa laga codsaday iney xoojiso oo ay adkeyso joogitaankeeda dhammaan magaalo madaxda maamul gobaleedyada, iyadoo xoojineysa baahida ammaan iyo xaaladaha nabad galyo, si loo taageero siyaasad ahaan, nabadeyn iyo dib u heshiisiin dalka ka dhacdo.
3-dii June sanadkii 2013-ka ayaa la sameeyay xafiiska UNSOM waxaana muddada loogu talagalay ahayd 12 bil, balse la sheegay in mudada loo kordhin karo.
Previous articleMadaxweyne Biixi oo Xadhiga ka jaray Shan Mashruuc oo waa weyn (Daawo Sawirada)
Next articleShirkii Jabuuti: Qodob cusub oo lagusoo daray heshiiskii Soomaaliya iyo Somaliland